Yintoni iNkqubo yoLawulo lwekhontrakthi? Zidume Kangakanani? | Martech Zone
Kwi-SpringCM yesithathu yonyaka Imeko yoLawulo lwekhontrakthi, baxela ukuba yi-32% kuphela yabaphenduli bophando abasebenzisa isisombululo solawulo lwekhontrakthi, benyuka nge-6% ngaphezulu konyaka ophelileyo.
Iinkqubo zoLawulo lwekhontrakthi bonelela umbutho ngeendlela zokubhala ngokukhuselekileyo okanye ukufaka iikhontrakthi, ukuhambisa iikhontrakthi, ukubeka esweni umsebenzi, ukulawula ukuhlela, ukwenza inkqubo yokuvunywa ngokuzenzekelayo, kunye nokudityaniswa kwamanani eekhontrakthi zokunika ingxelo.
Akumangalisi, kodwa kuyothusa ukuba uninzi lweenkampani zithumela izivumelwano nge-imeyile. Ngapha koko, i-Spring CM inika ingxelo yokuba ngaphezulu kwe-85% yamashishini asaqhotyoshela izivumelwano kwii-imeyile. I-60% yabaphenduli bophando bathi bayayilawula yonke inkqubo yesivumelwano nge-imeyile. Oku kuyasokolisa ngenxa yezizathu ezibini:
Imeyile yile hayi indlela yothutho ekhuselekileyo. Iifayile zinokuchongwa ngokulula kwaye zikhutshelwe ngendlela yenethiwekhi ebekiweyo naphi na phakathi kwabamkeli ngabagculeli.
Imibutho eninzi Kude okanye intengiso yokuhamba, oko kuthetha ukuba bahlala besebenza ngokungakhuselekanga, iinethiwekhi ezivulekileyo ezingagadwanga kukhuseleko kodwa ezinokuthi zibekwe iliso ngabanye.
Kwimibutho esebenzisa iqonga lolawulo lwesivumelwano, phantse omnye kwabane (22%) bathi ukunciphisa umngcipheko yayiyeyona nto iphambili kubo. Kwaye ngelixa imibutho emininzi isenza i-automation kwiinkqubo zayo zekhontrakthi, uninzi lusasokola nokuziphatha, ukungazithembi isivumelwano sekhontrakthi. Ukuzenzekelayo kokuhamba komsebenzi kuyo yonke inkqubo yolawulo lwekhontrakthi kunika ithuba elibonakalayo lomjikelo wentengiso osebenza ngakumbi, kwaye ishenxise imiceli mngeni kunye nomngcipheko onxulumene nokuhamba komsebenzi ngesandla. Amashishini akhetha ngempumelelo kunye nokuphumeza izisombululo zolawulo lwekhontrakthi kunokwenzeka ukuba afumane ukwanda kwengeniso kunye neziphene ezinxulumene nesivumelwano.
Izivumelwano ziligazi kwimibutho emininzi, kodwa amadili ahlala esila xa emile kwinqanaba lesivumelwano. Yiyo loo nto siphanda ngemiceli mngeni ehambelana nenkqubo yolawulo lwesivumelwano. Injongo yethu kolu phononongo kukubonelela abenzi-zigqibo ngokuqonda abanokukwenza ukuqhubela phambili iinkqubo zabo zolawulo lwesivumelwano. Ngaba uWiegler, usekela-mongameli omkhulu kunye ne-CMO e-SpringCM
Ingxelo epheleleyo ityhila ukuqonda kokwamkelwa kwetekhnoloji kwinkqubo yolawulo lwesivumelwano kunye neziphumo zokuphunyezwa kwenkqubo yolawulo lwesivumelwano. Ndongeze ukukhutshwa ngezantsi ngolwazi oluthe kratya.
Khuphela i-State of Contract Management
I-SpringCM inceda ukuhamba komsebenzi ngokuhambisa uxwebhu lolawulo kunye neqonga lokuhamba komsebenzi, eligunyazisa ukukhokela Ulawulo lobomi bekhontrakthi (CLM) isicelo. I-SpringCM ixhobisa iinkampani ukuba zivelise ngakumbi ngokunciphisa ixesha elichithwe kulawulo lwamaxwebhu abalulekileyo eshishini. Ubukrelekrele, ukuhambahamba okuzenzekelayo kwenza uxwebhu lwentsebenziswano kumbutho kuyo nayiphi na idesktop okanye isixhobo esiphathwayo. Ukuhanjiswa ngeqonga elikhuselekileyo nelinokuthenjwa, uxwebhu lwe-SpringCM kunye nezisombululo zolawulo lwesivumelwano ngaphandle komthungo zidityaniswe ne-Salesforce, okanye zisebenze njengesisombululo esizimeleyo.
tags: Ulawulo lobomi bekhontrakthiIndlela yokuphila yesivumelwanolawulo lwe mvu melwanoinkqubo yolawulo lwesivumelwanoUlawulo lwekhontrakthi yokuhamba komsebenziintwasahloboimeko yolawulo lwesivumelwano